Video: Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalax oo Magaalada Sanca Ku Dagaallamaya.
Saturday December 02, 2017 - 17:19:02 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.5/5 Stars) Total Votes: 2
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay magaalada caasimadda u ah wadanka Yemen, waxaana dagaallamaya Xulufadii kasoo horjeeday isbahaysiga Carabta ee wadankaasi ku duulay.
Saaka aroortii hore ayay si lama filaan ah dagaallo culus uga bilaawdeen qeybo badan oo katirsan magaalada caasimadda ah ee Sancaa, dagaallada oo ah kuwa culus ayay dhinacyadu isku adeegsanayaan gaadiidka gaashaaman iyo madaafiic.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalka ugu culus uu ka dhacay halka loo yaqaan fagaaraha 70-ka oo ah bartamaha magaalada islamarkaana ay ku yaallaan xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda.
kolonyo uu watay Jeneraal daariq oo katirsan saraakiisha Cali Cabdalla Saalix ayay rasaas huwiyeen xuuthiyiinta waxaana halkaasi ku dhintay sedax askari kadibna waxaa sidaas ku bilaawday dagaal aan waxba layskula kala harin.
Saraakiisha hoggaamiyihii hore ayaa sheegay in ujeedka lagalahaa rasaasta lagu furay kolonyada uu ahaa in lakhaarijiyo jeneraal daariq oo loo badinayo in uu jagada xisbiga mu’tamarka qaranka uu ka dhaxlo cali cabdalla saalix oo ah aabihii.
Maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa durbadiiba lagala wareegay dhul muhiim ah iyo xarumo caan ah sida wasaaradda maaliyadda,dhismaha bankiga dhexe,xarunta madaxtooyada,xarunta raadiyaha iyo telefeshinka,wasaaradda difaaca iyo xarunta ciidamada amniga qaranka.
Hoggaamiyaha maleeshiyaadka xuutihiyiinta Cabdul Malik alxuuthi ayaa kalimad ka jeediyay telefeshin xuuthiyiintu leeyihiin wuxuuna eedayn kulul ujeediyay wax uu ugu yeeray maleeshiyaad daalaa dhacaya oo doonaya in ay burburiyaan ammaanka iyo muhiimadda wax uu ugu yeeray muqaawamada,wuxuu umuuqday nin ka caraysan dagaalka uga yimid saaxiibkiisi shalay cali cabdalla saalax.
Sidoo kale bayaan kasoo baxay garabka hoggaamiyihii hore ee Yemen ayaa lagu sheegay in wixii saaka dhacay ay ahaayeen qiyaano halis ah, iyadoona jabaqda rasaasta laga maqlayay meelo badan oo katirsan magaalada sancaa.
Warar soo baxay ayaa xaqiijinaya in dagaalyahanno beeleedyo taageersan Saalix ay xuuthiyiinta ka eryeen gobollo dhowr ah sida Damaar,riimah.Eb iyo Ma’rib, tani waa ifafaale kale oo sii daba dheerayn kara dhibaatada heysata shacabka muslimiinta Yemen oo xuuthiyiinta iyo isbahaysiga dowladaha carabta ay kadeed dhan walba ah u horseedeen.
Wakaaladaha Gargaarka waxa loogu yeero Q.midoobe ayaa sheegaya in malaayiin qof oo Yemeniyiin ah ay xaalada adag ku suganyihiin kadib markii majaaco dadku gacmahooda ku sameysteen ay wadanka ka dilaacday.
War kasoo baxay Q.midoobe waxaa lagu sheegay in loo baahanyahay lacago balaayiin dollar ah si wax loogu qabto dadka dhibaateysan, xaaladda waxaa sii adkeeyay xayiraad dhanka barriga iyo badda ah oo sacuudigu kusoo rogay Yemen waxaana laga cabsi qabaa in dad badan ay gaajo u dhintaan.
Ugu yaraan 70 Qof oo isugu jira dhinacyadii dagaallamay iyo dad shacab ah ayaa la rumeysanyahay in ay ku dhinteen dagaallada culus ee ka socda magaalad Sanca.
Cali Cabdalla Saalax oo ka hadlay Telefeshin ku hadla Afka Xisbigiisa ayaa ugu baaqay shacabka Yemen in ay la dagaallamaan Xuuthiyiinta isagoona wax ka bedelay mowqifkiisa siyaasadeed ee dowladaha dariska oo uu ka codsaday in ay furan garoomada diyaaradaha iyo dekadaha waaweyn.
6 Qof Talyaani Ah Oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday Magaalada Ancona.
Qaraxyo ay Mas'uuliyadda Ku Dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Xiisado Kajira Magaalada Baydhabo iyo Max'med Mursal oo ka hadlay.
Weerar Hubeysan oo lagu qaaday Saldhigga Booliska Magaalada Boosaaso.